Vistaril vs. Xanax: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည် - မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း | ဇွန်လ 2022
ကုမ္ပဏီ, သတင်း ကုမ္ပဏီသတင်း သတင်း အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ဆီးဂိမ်း ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် ဖျော်ဖြေရေး မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ပြင်းထန်သောအားကစား မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း >> Vistaril vs. Xanax: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
Vistaril vs. Xanax: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
Vistaril နှင့် Xanax တို့သည်ကာလတိုစိုးရိမ်မှုများကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည့်အမှတ်တံဆိပ်ဆေးနှစ်မျိုးဖြစ်သည်။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါများခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်စေသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၄၀ ယင်းသည်အသုံးအများဆုံးစိတ်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကိန်းဂဏန်းများအရလူနာ ၄၀% ခန့်သည်အလွန်အမင်းကုသနိုင်သောဆေးဖြစ်သော်လည်းစိုးရိမ်စိတ်ကိုကုသရန်ရှာဖွေကြသည်။
စိုးရိမ်ပူပန်မှုအတွက်ကုသနည်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။ သိမှုနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာကုထုံးသည်သင်၏စိုးရိမ်မှုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်နိုင်ရန်သင်၏အတွေးအခေါ်နှင့်အမူအကျင့်ပုံစံများကိုဖော်ထုတ်ခြင်း၊ နားလည်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းကိုအာရုံစိုက်သည်။ ယောဂ၊ တရားရှုမှတ်ခြင်းနှင့်အပ်စိုက်ကုထုံးကဲ့သို့သောအခြားကုသနည်းများသည်အချို့သောသူများအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုလျော့နည်းစေသည့်အတွက်ထိရောက်မှုရှိသည်။ ဆေးဝါးများဖြင့်ကုသမှုသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအတွက်အဓိကကုသနည်းဖြစ်သည်။
ရွေးချယ်သည့် serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)၊ ရွေးချယ်သော norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs)၊ tricyclic antidepressants နှင့် benzodiazepines တို့အပါအ ၀ င်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုကုသရာတွင်ညွှန်ပြသောဆေးအမျိုးအစားများရှိသည်။ သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူသည်သင်၏ရောဂါလက္ခဏာများအပေါ် အခြေခံ၍ ကုသမှုအမျိုးအစားများကိုအကြံပြုနိုင်သည်။
Vistaril နှင့် Xanax အကြားအဓိကကွာခြားချက်များကဘာလဲ။
Vistaril (hydroxyzine pamoate) သည်ယာယီစိုးရိမ်ဖွယ်ရာလက္ခဏာများကုသရာတွင်အသုံးပြုသော antihistamine ကိုသက်သာစေသော piperazine အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ Vistaril သည်ဆေးညွှန်းအတွက်သာဆေးဖြစ်သည်။ H1 histamine အဲဒီ receptor ကိုပိတ်လိုက်တယ်။ ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွင်းရှိ H1 receptor ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းသည်သက်သာခြင်း၊ antiemetic၊ analgesic နှင့်အရိုးကြွက်သားများကိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသော်လည်းစိုးရိမ်စိတ်ကိုသက်သာစေရန်၎င်း၏အတိအကျကိုမသိရှိရသေးပါ။ Vistaril (Vistaril ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း) နှင့်၎င်း၏ယေဘူယျပုံစံကို ၂၅ မီလီဂရမ်၊ ၅၀ မီလီဂရမ်နှင့် ၁၀၀ မီလီဂရမ်တို့ဖြင့်ခံတွင်းဆေးတောင့်များတွင်ရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းကိုအရည်ရပ်ဆိုင်းမှု ၂၅ မီလီဂရမ် / ၅ မီလီမီတာတွင်လည်းရရှိနိုင်သည်။
Vistaril စျေးနှုန်းဆိုင်ရာသတိပေးချက်များအတွက် sign up ပြုလုပ်ပြီးစျေးနှုန်းပြောင်းလဲသွားသည်ကိုရှာဖွေပါ။
Xanax (alprazolam) သည်ကာလတိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ယေဘူယျစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါကုသရာတွင်အသုံးများသော benzodiazepine ဖြစ်သည်။ အခြား benzodiazepines များတွင် Ativan (lorazepam), Klonopin (clonazepam) နှင့် Valium (diazepam) တို့ပါဝင်သည်။ Xanax သည်ဆေးညွှန်းအတွက်သာဆေးဖြစ်ပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ (DEA) မှထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းအဖြစ်အမျိုးအစားခွဲထားသည်။ Xanax သည်စိုးရိမ်စိတ်များအပါအ ၀ င်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုအမျိုးမျိုးအတွက်တာ ၀ န်ရှိသည့် reticular လမ်းကြောင်းများအားတားဆီးခြင်းဖြင့်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ် (CNS) မှတစ်ဆင့်အလုပ်လုပ်သည်။ Xanax (Xanax ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း) နှင့်၎င်း၏ယေဘူယျပုံစံများကို ၀.၂၅ မီလီဂရမ်၊ ၀.၅ မီလီဂရမ်၊ ၁ မီလီဂရမ်နှင့် ၂ မီလီဂရမ်တို့ဖြင့်ပုံမှန်နှင့်နှုတ်အားဖြင့်ဖြိုခွဲသောဆေးပြားများပေါ်တွင်တင်ထားသည်။ ဖြန့်ချိသည့်တက်ဘလက်အားအားဖြင့် 0.5 mg, 1 mg,2mg နှင့်3mg တို့ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ 1 mg / ml တစ်အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်စုစည်းအရည်ရေးဆွဲရေးလည်းရှိပါသည်။
Vistaril နှင့် Xanax အကြားအဓိကကွာခြားချက်များ
မူးယစ်ဆေးအတန်း H1 histamine blocker Benzodiazepine
ယေဘုယျနာမည်ကဘာလဲ? Hydroxyzine pamoate Alprazolam
မည်သည့်ပုံစံ (များ) ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးထဲသို့ဝင်သနည်း။ ခံတွင်းဆေးတောင့် ပါးစပ်၊ နှုတ်အားဖြင့်ပြိုကွဲသွားခြင်းနှင့်ဖြန့်ချိသည့်တက်ဘလက်များသည်အာရုံစူးစိုက်နေသောအရည်ဖြစ်သည်
စံသောက်သုံးသောကဘာလဲ? ၂၅ မီလီဂရမ်ဆေးတောင့်တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ် တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ် ၁ မီလီဂရမ်ဆေးပြား
ပုံမှန်ကုသမှုဘယ်လောက်ကြာမလဲ စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်စဉ်များအတွက်လိုအပ်အဖြစ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်စဉ်များအတွက်လိုအပ်အဖြစ်
ဒီဆေးကိုဘယ်သူကပုံမှန်သုံးသလဲ။ ကလေးများနှင့်လူကြီးများ အရွယ်ရောက်သူ
Vistaril နှင့် Xanax မှကုသသောအခြေအနေများ
Vistaril သည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာအခြေအနေများတွင်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ တင်းမာမှုနှင့်စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်မှုများကိုကုသရာတွင်ညွှန်ပြသည်။ ၎င်းသည် histamine receptors အပေါ်ပြုမှုမှုကြောင့် Vistaril သည်နာတာရှည်ဆီးသွားခြင်း၊ အဆုတ်တွင်းရှိအရေပြားရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် atopic အရေပြားရောင်ရမ်းခြင်းတို့ကြောင့် pruritus (ယားယံခြင်း) ကိုကုသရာတွင်ညွှန်ပြသည်။ Vistaril ကိုကိုယ် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ခွဲစိတ်မှုကြောင့်ဖြစ်စေပျို့အန်ခြင်းနှင့်အော့အန်ခြင်းကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာအစလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက်သက်သာစေသောဆေးကိုပေးရန်အတည်ပြုသည်။
Vistaril ကိုလည်းအချို့သောလက္ခဏာများအတွက် off-label ကိုအသုံးပြုသည်။ အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု (FDA) မှအတည်ပြုမထားသည့်လက္ခဏာများအတွက်ဆေးညွှန်းမပါသောအသုံးပြုမှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ Vistaril သည်အိပ်မပျော်ခြင်းကြောင့်အိပ်မပျော်ခြင်းကိုယာယီကုသရန်အတွက် Off- တံဆိပ်ကပ်သည်။ ၎င်းသည်ရာသီအလိုက်မတည့် rhinitis (ရာသီဓာတ်မတည့်မှု) ကိုကုသရန်တံဆိပ်မကပ်ဘဲအသုံးပြုသည်။
Xanax စိုးရိမ်စိတ်၏ယာယီလက္ခဏာများနှင့်ယေဘုယျစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ (GAD) ၏ကုသမှုမှာညွှန်ပြနေသည်။ ဒါဟာအစထိတ်လန့်ရောဂါကုသမှုတွင်ညွှန်ပြနေသည်။ Xanax သည် premenstrual dysphoric disorder (PMDD) နှင့်သက်ဆိုင်သည့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဝေဒနာများကိုသက်သာစေရန် off-label ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အခြေအနေ Vistaril Xanax
ရေတို / ယာယီစိုးရိမ်စိတ် ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
ယေဘူယျစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
ထိတ်လန့်ရောဂါ မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
Pruritus ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး
ပျို့ / အန် ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး
အိပ်မပျော် တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည် မဟုတ်ဘူး
ရာသီအလိုက်ဓာတ်မတည် တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည် မဟုတ်ဘူး
Premenstrual dysphoric ရောဂါ မဟုတ်ဘူး တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည်
Vistaril သို့မဟုတ် Xanax ပိုမိုထိရောက်သလား။
တစ် ဦး ကကို double- မျက်စိကန်း, ထိန်းချုပ်ထား လက်တွေ့လေ့လာမှု anxiolytic, သက်သာစေသောဆေး, Amnesia နှင့် Pre- လုပ်ထုံးလုပ်နည်းလူနာအပေါ် Vistaril နှင့် Xanax ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုသက်ရောက်မှုနှိုင်းယှဉ်။ ဒီလေ့လာမှုက Vistaril သည် Xanax မှထုတ်လုပ်သောအလယ်အလတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လူနာများအတွက်စိုးရိမ်စိတ်အပေါ်မည်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုမျှမရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှစ်မျိုးသည်တုန်လှုပ်ချောက်ချားခြင်းနှင့်မှတ်ဥာဏ်အတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော်လည်း hydroxyzine ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကသွေးပေါင်ချိန်ကျဆင်းမှုကိုပိုမိုဖြစ်စေသည်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်ထိရောက်သောကြိုတင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးများဖြစ်သော်လည်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ရပ်များအပေါ်ပိုမိုသိသာသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့် Xanax ကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်။
မည်သည့်စိုးရိမ်စိတ်ကုသမှုသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းသင့်ဆရာဝန်ကသာဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်စိတ်ရောဂါသို့မဟုတ်အခြားစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုကြုံနေရလျှင်ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်တောင်းခံပါ။ ကိုယ်တိုင်ဆေးကုသရန် (သို့) ဆေးဝါးများမသောက်ရန်မကြိုးစားပါနှင့်။
Vistaril နှင့် Xanax နှိုင်းယှဉ်မှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်နှိုင်းယှဉ်မှု
Vistaril သည်ဆေးညွှန်းဆေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး Medicare နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအာမခံအစီအစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်သည်။ Vistaril အမှတ်တံဆိပ်တံဆိပ်သည်ဒေါ်လာ ၉၂ တန်ကုန်ကျနိုင်သည်။ SingleCare မှကူပွန်တစ်ခုနှင့်အတူယေဘူယျအားဖြင့် ၂၁ မီလီဂရမ် hydroxyzine pamoate ကိုရက် ၃၀ ထောက်ပံ့ရန်အတွက်သင်သည်ဒေါ်လာ ၄ ဒေါ်လာသာပေးနိုင်သည်။
Xanax သည်ပုံမှန်အားဖြင့်စီးပွားဖြစ်အာမခံအစီအစဉ်များဖြင့်အကျုံးဝင်သောဆေးညွှန်းဆေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ Medicare မူးယစ်ဆေးဝါးအစီအစဉ်များသည် Xanax ကိုလွှမ်းခြုံနိုင်သည်သို့မဟုတ်မပေးနိုင်ပေ။ ၎င်းကိုအချို့အစီအစဉ်များမှဖယ်ထုတ်ထားသည် Xanax ၏အိတ်ကပ်ဈေးနှုန်းမှာပျမ်းမျှဒေါ်လာ ၆၃ ခန့်ဖြစ်သည်။ SingleCare မှကူပွန်တစ်ခုနှင့်အတူ ၁ မီလီဂရမ်ယေဘူယျအားဖြင့်ရက် ၃၀ ထောက်ပံ့ရန်အတွက်ဒေါ်လာ ၁၀ ဒေါ်လာထက်မကပေးရပါမည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် Medicare အပိုင်း D ကိုဖုံးလွှမ်း? ဟုတ်တယ် အချို့ကိစ္စများတွင်
စံသောက်သုံးသော 30, 25 မီလီဂရမ်တောင့ 60, 1 မီလီဂရမ်ဆေးပြား
ပုံမှန် Medicare copay $ 10 Variable
SingleCare ကုန်ကျစရိတ် $ 4- $ 12 $ 9- $ 30
Vistaril vs. Xanax ၏ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
Anticholinergic ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ Vistaril နှင့် Xanax နှစ်မျိုးလုံးအတွက်ဖြစ်သည် (ပုံမမှန်ခြင်း) ။ အိပ်ငိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်အိပ်စက်ခြင်းသည်ဆေးနှစ်မျိုးလုံး၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်သည်။ အိပ်ငိုက်ခြင်းသည်နေ့စဉ်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပြီးကုသမှု၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုချိန်ဆသင့်သည်။ ပါးစပ်ခြောက်သွေ့ခြင်းသည် Vistaril သို့မဟုတ် Xanax သောက်သုံးသောလူနာများအပေါ်လည်းသက်ရောက်မှုရှိသည်။ သွားဖုံးနှင့်ပါးစပ်ဆေးခြင်းကဲ့သို့သောခြောက်သွေ့ပါးစပ်အတွက်ကုထုံးများရှိသော်လည်းအချို့သူများအတွက်အလွန်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
Vistaril သည် QT ကိုရှည်စေပြီး Torsade de Pointes (arhythmia ပုံစံများ) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Vistaril ကို QT ၏ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းရှိခဲ့သောလူနာများ (သို့) နှလုံးရောဂါ၊ လျှပ်စစ်မညီမျှမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကဲ့သို့သောအန္တရာယ်အချက်များရှိလူနာများတွင်ရှောင်ရှားသင့်သည်။
ပါးစပ်ခြောက် ဟုတ်တယ် သတ်မှတ်မထား ဟုတ်တယ် ၁၅%
အိပ်ငိုက် ဟုတ်တယ် သတ်မှတ်မထား ဟုတ်တယ် ၄၁%
တုန်လှုပ်ခြင်း ဟုတ်တယ် သတ်မှတ်မထား ဟုတ်တယ် ၄%
QT ကြာရှည် ဟုတ်တယ် သတ်မှတ်မထား မဟုတ်ဘူး N / A
ခေါင်းကိုက်ခြင်း ဟုတ်တယ် သတ်မှတ်မထား ဟုတ်တယ် 13%
အာရုံခံ ဟုတ်တယ် သတ်မှတ်မထား မဟုတ်ဘူး N / A
အဖု ဟုတ်တယ် သတ်မှတ်မထား ဟုတ်တယ် ၄%
မူးယစ်ဆေးဝါး မဟုတ်ဘူး N / A ဟုတ်တယ် နှစ်ရာခိုင်နှုန်း
သွေးတိုးရောဂါ မဟုတ်ဘူး N / A ဟုတ်တယ် ၅%
ရင်းမြစ်: Vistaril ( မင်းကွန်း Xanax ( မင်းကွန်း )
Xanax Vistaril နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု
Vistaril ကို albuterol သို့မဟုတ် formoterol ကဲ့သို့ရှည်လျားပြီးတိုတောင်းသော beta agonists များနှင့်ရှောင်ရှားသင့်သည်။ Beta agonists များသည် QT တိုးချဲ့မှုနှင့် Torsade de Pointes တို့နှင့်ဆက်စပ်နေပြီး Vistaril နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းအသုံးပြုခြင်းသည်ဤဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များ၏အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေသည်။
Vistaril နှင့် Xanax တို့သည် opioid agonists များနှင့်ပေါင်းစပ်။ ပြင်းထန်သောငိုက်မျဉ်းခြင်းနှင့်အိပ်ချင်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်သည်။ Xiox သည် opioid agonists များနှင့်ပေါင်းစပ်။ ပြင်းထန်သောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာစိတ်ကျဝေဒနာနှင့်သွေးပေါင်ချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ Codeine သို့မဟုတ် hydrocodone ကဲ့သို့သောဆေးများကိုပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပြီးရှောင်ရှားသင့်သည်။
Vistaril နှင့် Xanax တို့ကို sedhenating ဖြစ်နိုင်သော dipihhydramine သို့မဟုတ် chlorpheniramine ကဲ့သို့သောအခြား antihistamines များရှိလူနာများတွင်သတိထားအသုံးပြုသင့်သည်။ ဤဆေးများ၏ထပ်တိုးအိပ်မောကျခြင်းသည်လူနာအားအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဤသည် Vistaril နှင့် Xanax အတွက်ပြည့်စုံသောဆက်သွယ်မှုစာရင်းဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဆက်သွယ်မှုအပြည့်အစုံအတွက်သင်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူသို့မဟုတ်အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
မူးယစ်ဆေးဝါး မူးယစ်ဆေးအတန်း Vistaril Xanax
Hydromorphone Opioid agonist ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Levalbuterol beta ကို agonist ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး
Alfuzosin Alpha blockers ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး
Amantadine အာဒံ ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး
Amiodarone နာတာရှည်ရောဂါ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Erythromycin Macrolide ပantibိဇီဝဆေး ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Ciprofloxacin Fluoroquinolone ပiိဇီဝဆေး ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Cyclobenzaprine အရိုးကြွက်သားအပန်းဖြေ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Temazepam Benzodiazepines ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Metronidazole ကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး
Chlorpheniramine Antihistamines ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
ဖluoxetine စိစစ်ရွေးချယ်သည့် serotonin inhibitors (SSRIs) ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး
Ketoconazole antifungals ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Vistaril နှင့် Xanax ၏သတိပေးချက်များ
Xanax ကို opioid agonists နှင့်အတူတကွအသုံးပြုခြင်းသည်အသက်အန္တရာယ်ရှိသည့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာစိတ်ကျဝေဒနာနှင့်သွေးတိုးရောဂါကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်၎င်းသည်မေ့မြောခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်သေခြင်းဆီသို့ ဦး တည်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ပေါင်းစပ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်မဆုံးဖြတ်နိုင်ပါကဆိုးကျိုးများကိုလူနာများအားအကြံပေးရမည်။ ဤဆေးများကိုသောက်နေစဉ်လူနာများသည်စက်ယန္တရားကြီးများမမောင်းနှင်သင့်ပါ။
Xanax သည်ထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းများဖြစ်ပြီးအလေ့အထကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Xanax ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ရေတိုကုသမှုခံယူပြီးနောက်၌ပင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုမှုနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုကိုဖြစ်ပွားစေသည်။ ဤအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်သင်၏ဆရာဝန်ကသတ်မှတ်ထားသော Xanax ပမာဏကိုကန့်သတ်ထားနိုင်သည်။
သိမ်းယူမှုအပါအဝင်ထုတ်ယူခြင်းလက္ခဏာများ, Xanax ဆေးထိုးလျှော့ချသို့မဟုတ်ရပ်စဲနှင့်အတူပေါ်ပေါက်လိမ့်မည်။ ဆေးကုသမှုခံယူသူများ၏ဆိုင်းဘုတ်များနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများကိုစောင့်ကြည့်နေစဉ်တွင်ဤဆေးကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်၏အကြံဥာဏ်ဖြင့်ရောစပ်ထားသင့်သည်။
Vistaril vs. Xanax နှင့်ပတ်သက်ပြီးမကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ
Vistaril သည်ယာယီစိုးရိမ်စိတ်လက္ခဏာများကိုကာလတိုကုသမှုတွင်အသုံးပြုသည့်ဆေးညွှန်း histamine-1 blocker ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အိပ်မပျော်ခြင်း၊ ယားခြင်းနှင့်မတည့်ခြင်းတုံ့ပြန်မှုလက္ခဏာများကိုကုသရန်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းကိုပါးစပ်ဆေးတောင့်၊ ပါးစပ်ဖြင့်ဆိုင်းငံ့ခြင်းနှင့်ဆေးထိုးခြင်းများအဖြစ်ရရှိနိုင်သည်။
Xanax သည်ကာလတိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုအပြင်ယေဘူယျစိုးရိမ်ပူပန်မှုဆိုင်ရာရောဂါနှစ်မျိုးလုံးအတွက်အသုံးပြုသောဆေးညွှန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဆေးညွှန်းဖြစ်သောစိုးရိမ်ဖွယ်ရာဆေးဝါးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် benzodiazepine ဖြစ်ပြီးစွဲစေနိုင်သောအလားအလာရှိသောထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုပါးစပ်ဖြင့်နှုတ်ဖြင့်ဖြိုခွဲခြင်းနှင့်ဖြန့်ချိသည့်တက်ဘလက်အဖြစ်ရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းကိုစုစည်းထားသောပါးစပ်အရည်အဖြစ်လည်းရရှိနိုင်သည်။
Vistaril နှင့် Xanax အတူတူလား?
Vistaril နှင့် Xanax နှစ်မျိုးလုံးကိုရေတိုစိုးရိမ်မှုများကိုကုသရန်အသုံးပြုသော်လည်း၎င်းတို့သည်ဆေးဝါးတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ပါ။ Vistaril သည် antihistamine အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Xanax သည် benzodiazepine ဖြစ်သည်။
Vistaril သို့မဟုတ် Xanax ပိုကောင်းသလား။
Xanax သည်ယာယီလက္ခဏာအခြေအနေများတွင်စိုးရိမ်မှုများကိုလျော့ချရာတွင်ပိုမိုသိသာသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါ somnolence နှင့် amnesia သဘောထားတွေကိုမူးယစ်ဆေးဝါးများအကြားနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ Vistaril သည်သွေးပေါင်ချိန်နိမ့်ခြင်းမှာ Xanax ထက်ပိုမိုများပြားသောကြောင့်ထို့ကြောင့် Xanax သည်ယာယီကာလတိုစိုးရိမ်စိတ်အခြေအနေများတွင်ပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည်။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေစဉ် Vistaril သို့မဟုတ် Xanax ကိုသုံးလို့ရပါသလား။
Vistaril ကိုအစားအစာနှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦး စီးဌာနမှကိုယ်ဝန်အမျိုးအစား C အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင်ဘေးကင်းရေးကိုလေ့လာရန်လုံလောက်သောလေ့လာမှုများမလုံလောက်ပါ။ အကျိုးကျေးဇူးများသည်အန္တရာယ်များကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျော်လွန်မှသာ၎င်းကိုအသုံးပြုသင့်သည် Xanax ကိုကိုယ် ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစား considered ဟုသတ်မှတ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာလေ့လာမှုများအရကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကာလအတွင်းသန္ဓေသားကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းနှင့်၎င်းအားကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကာလအတွင်းအသုံးပြုရန်မသင့်ကြောင်းလေ့လာမှုများကသက်သေပြခဲ့သည်။
ငါ Vistaril (သို့) Xanax ကိုအရက်နဲ့သုံးလို့ရနိုင်မလား။
အိပ်ငိုက်ခြင်းနှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနှုန်းနှေးစေခြင်းတို့ကြောင့်အရက်၏အလားအလာကြောင့် Vistaril သို့မဟုတ် Xanax နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းအသုံးပြုခြင်းကိုမထောက်ခံပါ။
Vistaril သည်ကာလတိုစိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ယာယီလက္ခဏာများကိုကုသရန်ခွင့်ပြုထားသည်။ ၄ င်းသည်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောဆိုးကျိုးများကြောင့်သင်၏ဆရာဝန်သည်နေ့စဉ်စိုးရိမ်စိတ်ကိုလျော့နည်းစေသည့်အခြားကုထုံးတစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
Vistaril ၏သက်ရောက်မှုသည်ဆေးသောက်ပြီးနောက် ၁၅ မိနစ်မှ ၆၀ မိနစ်သာကြာပြီး ၄ မှ ၆ နာရီအထိကြာနိုင်သည်။
Vistaril သည်ထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းများမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်အလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုမှုအတွက်သိသာသောအလားအလာမရှိပါ။
sildenafil နှင့် sildenafil citrate သည်အတူတူဖြစ်သည်
pepcid ac အလုပ်လုပ်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာလဲ